Mogadishu Journal » Madaxweyne Siilaanyo iyo wafdi la socda oo u dhoofay dalka Faransiiska
Mjournal : — Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Axmed Max’ed Max’uud Siilaanyo iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa, iyaga oo ku sii jeeda dalka Faransiis.
Siilaanyo, oo ka hor inta uusan ka dhoofin warbaahinta la hadllay ayaa sheegay in isaga iyo xubnaha la socda ay ku sii jeedaan dalka Faransiiska kadib markii sida uu sheegay madaxda dalkaas ay ka helleen martiqaad rasmi ah.
‘’Anniga iyo wafdiga ila socda waxaa maanta ku sii jeednaa dalka Faransiiska,halkaaso casuumad an ka helnay madaxda dalkaasi,waxaa qorshuhu yahay inan shirar la qaadano mas’uuliyin ka tirsan dalkaasi,maadaama Faransiisku uu yahay dal weyn oo saxaaxib nala ah,’’ ayuu yiri Axmed Siilaanyo.
Waxaa uu intaa ku darray in marka ay gaaraan dalka Faransiiska ku soo biiri doonaan xubnaha maamulka Soomaaliland uga qeyb-gallaya wada hadallada Soomaaliya ee ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Mar uu soo hadal qaaday wada hadallada u socda maamulka Soomaaliland iyo dowladda dhexe ayuu sheegay in uu ka fillayo wada hadalladaas in ay ka soo baxaan qodobo dan u ah shacabka sida uu hadalka u dhigay labada dal oo markaa uu ula jeedo Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Todobaadyadii ugu danbeeyayba waxaa sii kordhayay si kordhaysa safarrada dibadda ee madaxweyne Siilaanyo,waxaana ujeedada safaarada lugu sheegay inay la xiriirto sidii loo wanaajin laha xiriirka Soomaaliland iyo dalalka kale ee saaxibka la’ah.